Software Horumarinta - Shenzhen Sichi Technology Co., Ltd.
Shenzhen Sichi Technology Co., Ltd. diirada saaraya macaamilka, warshadaha iyo suuqyada kale, waxay bixiyaan wareegyo isku dhafan oo xirfadeed, xalalka badeecada iyo taageero farsamo. wuxuu dejiyaa softiweerka DOS, wuxuu wax ka beddelaa barnaamijka DOS, Software -ka Deciphers DOS, Deciphers dongle, Software -ka Deciphers ee Kombiyuutarka Shakhsiga Warshadaha, Wuxuu wax ka beddelaa kombiyuutarka Shakhsiga Warshadaha, wuxuu dejiyaa softiweerka Kombiyuutarka Shakhsiyeed ee Warshadaha. Waxaan naqaan VB, VC, Delphi, C#, Java/J2me, C, C ++, SQL Server, Oracle, NET, PHP, ASP iyo wixii la mid ah.
1.Waxaan la kulannaa baahiyaha gaarka ah ee macmiilkayaga (kiiska ku jira software -ka gaarka ah), si loo daboolo baahi loo arko.
2.Waxaan la kulannaa qaar ka mid ah adeegsadayaasha suurtagalka ah (kiiska leh softiweer ganacsi iyo il furan), ama adeegsi shaqsiyeed (saynisyahan eGA ayaa laga yaabaa inuu u baahdo inaan qoro software si aan u shaqayno hawl aan caadi ahayn).
3. Horumarinta softiweerka la galiyay. Waa kobcinta softiweerka gundhigga ah sida loo isticmaalo xakamaynta badeecadaha macaamiisha.
Si dhakhso leh uga jawaab baahida macaamiisha iyo suuqyada, sii badeecooyin tayo sare leh iyo adeegyo farsamo oo dhammaystiran.Fiir u yeelo baahiyaha macmiilka, hoggaaminta horumarinta farsamada, go'aanso inaad wax cusub samayso, oo aad hal tallaabo hore u qaaddo.